Cherry juice ekhaya kungenziwa ngezindlela ezahlukene. Ngokuvamile iziphuzo enjalo abilisiwe ifakwa emathinini ukuze ebusika. Nokho, abanye abapheki uncamela ukuzisebenzisa kuphela ngesimo fresh.
Njengoba kufanele uzilungiselele cherry juice ekhaya, sizobe ukuchaza kancane okunye.
Yenza ijusi fresh kusukela cherry ekhaya
Wake wazama fresh cherry juice? Indlela lokhu isiphuzo akudingi isikhathi esiningi kanye izithako. Kodwa ukuze uthole juice esihlwabusayo ngempela futhi unempilo, uzoba ukusebenza kanzima.
Ngakho, ukwenza siqu cherry fresh juice sakho, sidinga:
cherry Asanda - mayelana 2 kg;
ukuphuza amanzi - ukusetshenziswa at intando;
ushukela - mayelana 100 g (ukunambitha).
Ngaphambi kokwenza cherry juice, kufanele ukuphatha kahle berry asanda. It alungise, sandile colander bese wageza kahle. Ngemva kwalokho, ngawakhamela phandle zonke imigodi cherry. Kwenze phezu endishini ejulile. Juice eziyogelezela ngalesi nqubo akufanele kulahliwe. Kufanele uxhumeke uginindela.
Once amajikijolo okwenziwa, isiqala ngawakhamela juice. Kuze kube yimanje, i-cherry sandile ngesihlungo esihle, okuyinto lihlelwe esitsheni ezijulile. Grind zonke izithako tolkushkoy, abasakwazi uqweqwe amakhowe amnandi ngaphandle ikhekhe. Phela, lo ikhasi nezinye uginindela ezisele ngemuva ukuqaliswa lezi zenzo kungenziwa alahlwe noma ukushisela kubo kusukela compote.
Grind wonke amajikijolo ngesihlungo, bawendlala endaweni gauze multi-ungqimba, bese ngokuqinile kukhanywe zonke okuqukethwe esikhwameni. Ngenxa yalokho lezi zinyathelo, kudingeka uthole uqweqwe kanzulu isiphuzo maroon.
Kanjani ukuthi igcine iphinde isebenzise?
Fresh cherry juice akufanele kugcinwe isikhathi eside (ngisho ku esiqandisini). Lokhu kungenxa yokuthi it is ngokushesha oxidized baphanga. Uma ucabanga ukuthi lesi siphuzo kuyoba omuncu kakhulu futhi wagxila ke kungenzeka ukuba eminye engeza ushukela kancane futhi amanzi okuphuza.
Fresh cherry juice is hhayi Kunconywa ukusebenzisa abantu abanezifo isisu kanye nezinye izinhlaka ipheshana wokugaya ukudla.
Kuvuna cherry wokuphuzwayo ebusika
Cherry juice ngoba isivuno ebusika muhle kulabo bathanda ujabulele isiphuzo engokwemvelo ukukhiqizwa siqu, ukugcwalisa umzimba wakho ne amavithamini phakathi nenkathi ebandayo.
Ukuqalisa lokhu iresiphi sizodinga:
ukuphuza amanzi - 500 ml;
ushukela - 250 grams (ukunambitha).
Ukulungiselela komkhiqizo eyisisekelo
Njengoba singabona kule ebusika sokuvuna cherry juice? Indlela lokhu isiphuzo kudinga ukusetshenziswa amajikijolo fresh kuphela. Wakhe bakha ngokucophelela wageza, bese ngawakhamela zonke amathambo. Ngemva kwalokho, umkhiqizo ibekwe ngesihlungo encane wagcoba usebenzisa tolkushkoy. Ingxenye esele amajikijolo ikhekhe alahlwe futhi uginindela juice abilisiwe.
Ikhaya le juice cherry wayengekho alimele ayizange ithuthuke kwaze kwathi ebusika, kumelwe nakanjani kube sesimeni ukufudumeza ukwelashwa. Yiqiniso, ukwenza inqubo enjalo kwakuyokwenza amajikijolo iningi amavithamini. Nokho, indlela kuphela ungakwazi ukujabulela isiphuzo esimnandi ngenkathi ezibandayo.
Ngemva trituration obuphelele cherry yayo uginindela ibekwe ku-esitsheni koqweqwe lwawo bese wanezela amanzi okuphuza evamile, kanye noshukela. Hlanganisa wonke izithako, basuke alethwe ngamathumba. Cherry juice ngamathumba on ukushisa low cishe amaminithi angu-3, uqhubekele ukulondolozwa kwemvelo.
Indlela alondoloze isiphuzo lesifanele?
Uma ijusi yama berry usulungile, it is batheleka inzalo ingilazi izimbiza. Ngokulandelayo, amboze zamabhodlela esitsheni ibekwe embizeni, phansi lapho ithawula Itshe. Bay izitsha ngamanzi (kufika emahlombe namakani), kulethwa ngamathumba. Ngenxa yalokho, ijusi cherry kugcinwa for isigamu sehora. Khona-ke isitsha isuswe ashisayo bese livalwa nge-caps inzalo.
Ukuvula izimbiza sibheke phansi, cishe usuku lwabo selehlile ekamelweni lokushisa bese zisuswe egumbini elingaphansi noma emiphongolweni (isb indawo cool). Sebenzisa it njengoba juice can ezinsukwini ezimbalwa.
Bilisa juice nge imbewu
Ngokusho kochwepheshe, emathanjeni cherry ziqukethe prussic acid, okuba nomthelela omubi empilweni yomuntu. Kule ndaba, a ayo berry kungagcineki isikhathi eside kakhulu. Kufanele kudliwe zingakapheli izinyanga 2-3.
Ngakho, ukwenza juice ne cherry imigodi sidinga
amanzi okuphuza - 3-5 amalitha;
ushukela - 400 g (wanezela ukunambitha).
Amajikijolo salokhu juice okufanele zithathwe ngangokunokwenzeka fresh. Basuke ihlelwa, bese sandile colander bese wageza kahle. Ngemva kwalokho, cherry omisiwe oluhlukaniswe ngumuntu amabhange ezintathu-litre zazo inzalo kusengaphambili.
Ukuze okumnandi kakhudlwana futhi kanzulu juice esitsheni egcwele nengxenye noma 1/3.
Ukupheka cherry juice nge imbewu kufanele ibe izigaba eziningana. Okokuqala, iningi ezivamile eyigugu pan is wathela amanzi, bese kulethwa ngamathumba. Thela endishini ushukela granulated, elinde usuhlakazekile ephelele. I isiraphu okuholela is batheleka amabhange, lapho amajikijolo babekwa kusengaphambili.
Ukuba ithangi ezigcwele isiphanyeko bona, ukumboza ofeleba washiya kulesi sikhundla imizuzu 20-35. Ngemva umbala amanzi ushintsho futhi babe bomvu emnyama, amathini avalwa ngesivalo ekhethekile izimbobo ezincane kanye juice kuthululwe emuva emgqonyeni. Ngemva kokulinambitha isiphuzo ukunambitheka, nalokho laphinda wanezela ushukela (uma kunesidingo). Ngenxa yalokho, lo isiraphu kulethwa ngamathumba bese batheleka amabhange. Ngalesi sikhathi ebhodweni ngokushesha Roll up, vula sibheke phansi futhi esongwe ngengubo yokulala obukhulu.
Kuleli fomu, cherry isiphuzo inakekelwa cishe 3 izinsuku, bese kususwa isiqandisi noma subfloor.
Cherry juice nge imbewu kufanele waphikelela ekamelweni emnyama futhi kancane cool mayelana amasonto 3-5. Enjalo isikhathi eside ukuchayeka isiphuzo kuzokwenza kube acebile futhi okumnandi okuningi.
Spill cherry ijusi ingilazi ubude, ukunambitheka kwalo ku ulwanga. Uma uthola amnandi kakhulu futhi wagxila, kungashiwo buhlanjululwe ngamanzi okuphuza abavamile (selehlile amanzi phansi abilisiwe).
Ukunambitheka lesi siphuzo sihluke kakhulu ezivamile ukunambitheka cherry juice wenza seedless.
Zagotavlivaya siqu juice azakhele cherry ngesikhathi ebusika awusenakuqhubeka ukuthenga iziphuzo enongiwe esitolo. By the way, lona wamuva aqukethe hhayi kuphela omningi, kodwa futhi izithasiselo alimazayo zingayilimaza impilo yomuntu.
Borsch Ukrainian, iresiphi
Tincture Schisandra: inzuzo kanye nokulimala, yokusetshenziswa
Kungani ngiba green snot? Indlela esiphatha ngayo?